प्रलेसमा पद्मरत्न तुलाधारबारे चर्चा हुँदै - Everest Dainik - News from Nepal
प्रलेसमा पद्मरत्न तुलाधारबारे चर्चा हुँदै
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ । प्रगतिशील लेखकसंघ नेपाल केन्द्रीय समितिले ‘प्रगतिशील साहित्यका सन्दर्भमा पद्मरत्न तुलाधर’ विषयमा परिसम्वाद कार्यक्रम चलाउने भएको छ ।
प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रवार संचालन हुने ‘प्रलेस परिसम्वाद’को १८ औं शृंखलामा दिवङ्गत वाम वुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी एवं राजनीतिज्ञ पद्मरत्न तुलाधरको साहित्यिक योगदानबारे चर्चा गरिने कार्यक्रमका संयोजक एवं प्रलेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. पुस्करराज भट्टले जानकारी दिए ।
उक्त परिसम्वादमा डा. चुन्दा श्रेष्ठले तुलाधरको साहित्यिक योगदानबारे चर्चा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कार्यक्रम यही मङ्सिर ७ गते, शुक्रवार दिनको २ बजे प्रलेस केन्द्रीय कार्यालय, बागबजारमा योजना गरिने छ ।
ट्याग्स: padmaratna tuladhar, prales